Howl wadeeno ka tirsan xafiiska ceeymiska oo macluumaad muhiim ah xaday | Somaliska
Howl wadeeno ka tirsan xafiiska ceeymiska oo macluumaad muhiim ah xaday
Shan ruux oo ka tirsan xafiiska ceeymiska ee Försäkringskassan, ayaa dacwad lugu soo oogay ka dib markii ay xadeen xogta shaqsiyaadka lixaadkooda dhameyn ee howl gabka ah. Xogtan ay xadeen shantan ruux ayey u sii gudbiyeen xafiis lugu magacaabo Assistansbolag.
Shirkadan assintansbolag ayaa iyadoo kaashaneeysa shaqsiyaadka xogta siiyey waxaa suuragal u noqotay ineey abuuraantaan “macaamil cusub oo xubin ka noqda. Shantan ruux ayaa sidoo kale waxeey xirriiro gaar ah la lahaayeen shirkadan assistansbolag.
“Tani waaa dhaawac la sameeeyey waxeeyna ay ihaano ku noqoneeysaa shaqsiyaadka xogtooda la gudbiyey, waxeey sidoo kale dhaawac ku tahay xafiiska” ayuu yiri Linus Nordenskär oo ah isku duwaha qaranka ee u qaabilsa xafiiska ceymiska oo waramayey wargeyska Svenska Dagbladet.
Haweeney ka mid shaqsiyaadkaasi xogta gudbiyey ayaa nin ka tirsan xafiiska assistansbolag waxaa u keenay toorte ka dib mar dani ka soo gashay xafiiska ceeymiska, wixii intaasi ka dambeeyeyna waxaa ay haweeneydani si tar tiib tariib ah ugu gudbisay assistansbolag xog badan oo la xirriira dadka lixaadkoodu dhameyn si xafiiskaasi assistansbolag-gu u fuliyo adeegyada loo sameeyo dadka lixaadka la’a. Haweeneydan ayaa haatan waxaa lugu soo oogay dacwad ku tagri fal awoodeed iyo bixinta xogta qorsoon ee aan la ogoleyn in la bixiyo.
Sidaas si la mid ah ayaa howl wadeen kale oo xafiiska ceeymiska ka howlgala waxaa uu bixiyey macluumaad la xirriira shaqsiyaad howl gab, kuwaas oo ku fadhiyey adduun gaaray 13 milyan oo karoon oo ku helay muddo gudaheed. Howl wadeenkan ayaa markii dambe shaqo ka bilaabay xafiiskaasi assistansbolag.
Ugu dambeyntiina Linus waxaa uu sheegay in weli kalsooni buuxdo ku qabaan xafiiska ceymiska balse ay dhic karto arrimo noocaan ah markii muddo dheer lala shaqeeyo shaqsiyaadka qaar. Wuxuu sidoo kale sheegay ineey islamarkiiba talaabo xoogan qaadeen oo ay dacwad ku soo oogeen shaqsiyaadkii ku lug lahaa godbinta xoga dadka lixaadka la’a ee xafiiska ceymisku siiyo dhaqaale lugu kabo.
Dhalinyarro soomaali ah oo loo heeysto kufsi ay u geeysteen haweeney 40 jir ah
Nin diiday in uu salaamo haweeney oo shaqadii laga ceyriyay ka dibna dacwad furay
Daawashadda badan ee teleefeyshinka oo sameeyn ku reeba caafimaadka carruuraha